playstation 5 Archives - SmartMe
Tag archives: caloosha 5
Dom » Galitaanada ku qoran "sumadaysan 5"
Weli ugaarsiga PlayStation 5? Neonet waxay kuu haysaa wax weyn!
18 Maarso 2021
Dhawaan, dalab kale ayaa u muuqday taageerayaasha PlayStation 5 kuwaas oo dhab ka ah iibsashada qalabkan. Suuqyada laga bilaabo bilowga hore waxay leeyihiin dhibaatooyin waaweyn helitaanka PS5, markaa mid kasta oo ka mid ah noocyadan ...
Cyberpunk 2077 - wuxuu ku dhacay meeshii ugu dambeysay (Dib u eegis)
Cyberpunk, cyberpunk 2077, ciyaarta ciyaarta, Playstation 5, ps5
Waxaa jiray kuwo badan, runtiina badan oo dib u eegista Cyberpunk 2077. Kuma fiirinayno ciyaaraha SmartMe waana ay u badan tahay in uusan is bedelin, laakiin Cyberpunk ayaa ka reebi doona. Waxaan sugeynay kulankaan Polishka sanado, iyo Paweł, oo wata tiirarkiisa ku saabsan Gothic, ...
PlayStation VR 2 ayaa lagu dhawaaqay. Horudhac sanadki ugu horreeyay
Playstation 5, caloosha vr2, Sony
In ka badan afar sano ayaa ka soo wareegtay tan iyo markii ugu horreysay ee jiilka koowaad ee nidaamka dhabta ah ee muuqaalka dhabta ah laga keenay Sony. Soo saaraha Jabbaan ayaa hada ku dhawaaqay bedelkiisa, PlayStation VR 2. Jiilka ugu dambeeya ee nidaamka VR, dabcan, waxaa loogu talagalay inuu la shaqeeyo qalabka 'PlayStation 5' ...